Inni kun seenaa fi caafataanis dhugaa ta'uu isaatiin, sadeen isaanii eessaa akka dhufan namootaaf dinqisiisaa dha. Walga'ii Niqiin bara 325 D.B taasifame keessatti inni kun hundee sirna barsiisa amantaa ta'e. Barsiifni waaqota sadii(gonkumaa caafataan kan hin deeggaramne) kun waaqolii hedduu Roomaanotaa irratti kan hundaa'e ture.
Yesuus, “Waaqayyoo irraa dhufe, deebi'ees gara waaqaa ni deema,” jedhe. Yohaannis 16:27-28 titti. Sirriidhumatti wanti raawwate sanuma. Karaa du'a, awwaala, du'aa ka'uu fi ol deemuu Isaatiin biyya lafaa irraa bade. Sana booda immoo Phaawulos karaa gara Damaasqoos irratti Isa argee, Innis Phaawulos dubbisee, “Saa'ol, saa'ol maaliif na ariitaa?”, jedheen. Phaawulosis deebisee, “Ati eenyu yaa Gooftaa?” Inni, “Ani Yesuus,” jedheen. Inni utubaa ibddaa, kan ija jaamsu ture. Akkuma deebi'ee nan dhufa jedhetti, deebi'ee dhufe. Garuma foon namaa uffachuu Isaatiin dura turetti deebi'e. Kun immoo sirrumatti wanta Yohaannis argee dha. Yohaannis 1:18, “Homtinuu takkaa waaqayyoon hin argine, ilma tokkicha abbaan hammatee ture sanatu, waay'ee isaa hiikee beeksise malee.” Hubadhaa Yohaannis Bakka teessoo Yesuus Hime. Harka Abbaa Isaa KEESSA ture.